Rutendo Chigudo uyo aiva iye mushamarari achikumikidza Linda Gabriel aka Poetic Angel mudariro kuti adetembe semutembi airemekedzwa zuva iri.
Moreblessing Size naLinda Gabriel vachinakidzwa zvavo vakamirira kuti Linda semudetembi anoremekedzwa agoenda mudariro kundosetsa nokudzidzisa vainge vakaungana pachiitiko che Sistaz Open Mic chasive nedingindira rekuti be breast aware/chenjerera gomarara remazamu.
Linda Gabriel aka Poetic Angel achiita detembo rake rinonzi Funneral Gossip/Makuhwa apanhamo.
Linda Gabriel aka Poetic Angel achiita detembo rake rechipiri rinonzi Sins of Our Mothers/Zvivi Zvamadzimai edu.
Umwe wevaimbi vechidzimai arikusumukira anonzi Masi achangobura dambarefu rake idzva rinonzi Chishuwo achitandadza vainge vakaungana muBook Cafe.